Nharaunda Management Yakaitwa Zvakarurama | Martech Zone
Nharaunda Management Yakaitwa Zvakarurama
China, August 29, 2013 NeChishanu, Nyamavhuvhu 30, 2013 Kelsey Washington
Kunyangwe hazvo mabasa avo anogona kunge akasiyana zvakanyanya kubva kune imwe indasitiri kuenda kune inotevera, mamaneja enharaunda kazhinji ndivo vane chekuita nekuratidzira kwevateereri uye kuita. Nguva dzose wekutanga mumutsetse wekuwana zvinodiwa nevatengi vako uye zvikumbiro, vanoramba vakatarisa pane zvakanakira kambani yako: kubatsira kuchengetedza vateveri venharaunda, kukunda matroll asingadzivisike, uye nekuvandudza maonero ako ezve brand.
Kunyangwe kurongedza kuburikidza nezvakatumirwa uye mameseji, kuronga zviitiko, kana kushandura zvisina kunaka mhinduro kuva zvakanaka, mamaneja enharaunda ndiyo bhiriji rekupedzisira pakati penharaunda yevatengi nemuchina wako… kuita mabasa mazhinji nemabasa kamwechete. Kune rimwe divi, vanokurudzira vatsigiri kuva shasha — vachivapa kuzivikanwa pamhepo, chinzvimbo chevatungamiriri, uye kugona kwakazara ruzivo rwekambani. Kune rimwe racho, vanoona, vanoongorora, uye vanogadzirisa kusawirirana uye kupunzika pakati penharaunda, kuchengetedza mhinduro dzisina kunaka kubva mukukanganisa chimiro chako chekambani.
Vanozadzisa sei zvinangwa zvekushinga zvakadaro? Maererano ne Wana Kugutsikana, kuchengetedza nharaunda yakasungwa kunonetsa asi kunokwanisika kune avo vakagadzirirwa zvakanaka. Tarisa uone yavo nharaunda maneja zviwanikwa uye gwara rekubudirira:
Tags: shashaNharaunda MAnagementcommunity managerMabatiro evatengiinfographictrolls
Tungamirai WordPress Jetpack Shortcode Hupamhi
Diki Bhizinesi Gwaro reSocial Media Mastery
ndeipi yako tweet kelsey kelsey ??